Ama-Emulators ama-5 ahamba phambili we-Android Windows 10 - Kubuyekezwe (2020) - Ama-Softwares
Ama-Emulators ahamba phambili we-Android Windows 10
Akukho ukushoda kwama-emulators namuhla. Ngakho-ke, uma ufuna i-emulator ukusebenzisa i-Android ku-Windows PC yakho, ungakuthola nakanjani.Kunezizathu eziningi zokuthi kungani ungafuna ukusebenzisa i-emulator ye-Android ku-Windows PC yakho. Isibonelo, ungathola ukufinyelela kuzinhlelo zokusebenza eziningi ze-Android kudeskithophu yakho, futhi nabadlali bamageyimu bangajabulela imidlalo emangalisayo ye-Android kusikrini esikhudlwana futhi uhlu luqhubeka ngokuqhubekayo.
Yebo, manje uyazi ukuthi yiziphi izinzuzo eziningi zokusebenzisa i-Android emulators, ngakho-ke, ungahle uthande ukuzama ukuphuma.Kukhona futhi ama-emulators e-Android angasebenzi njengoba ekhombisa abasebenzisi. Ngakho-ke, sikubambile. Sibala ama-emulators ama-5 amahle kakhulu we-PC.Bonke laba balingisi kufanele bakwazi ukusebenza ku-Windows 7, 8, 8.1 & 10 futhi.
Ufuna Ama-emulators we-PC ye-PC ? Bheka umhlahlandlela wethu wakamuva.
Ama-Emulators ahamba phambili we-Android we-PC (Windows 10 & 8)
1. MEmu Dlala
Kulungile, ngakho-ke i-MEmu Play kungenye i-emulator emangalisayo ye-Android esebenza kuWindows esanda kuthola ukuthandwa okuningi.Ngaphandle kwalokho, le emulator iza nekhono lokusebenzisa izimo eziningi zezinhlelo zokusebenza nezinguqulo ze-Android ngasikhathi sinye. Futhi, isoftware isuselwe ku-Android Nougat (7.1.2) ngokuzenzakalela futhi ingasebenza futhi ngeKit Kat (4.4) kanye neLollipop (5.0) nayo.Le Emulator ikuvumela ukuthi ube namawindi amathathu ahlukene kuzo zonke izinhlobo ezintathu ze-Android. Ngakho-ke, ihluke ngokuphelele kwabanye.
Ake sithembeke, empeleni kuwumsebenzi onzima kakhulu ukuqamba okukodwa noma ngisho nezici ezimbalwa zalesi Emulator esimangazayo njengoba iMEmu iza ilayishwe ngezinto eziningi eziwusizo.
Esinye sezici ezinhle kakhulu ze-emulator iqiniso lokuthi isekela ama-Intel kanye nama-CPU we-AMD nawo amahle kakhulu ngokwethembeka ekubukeni kokuhambisana.Siyazi ukuthi kuyamangalisa, kepha kuyisici esingatholakali kuma-emulators amaningi we-Android laphaya.
Njengoba sazi, i-emulator inokulungiselelwa okuthile okumangazayo kwe-gameplay, sinomuzwa wokuthi kungenye yezimpawu ezinhle kakhulu ze-Android kubasebenzisi abajwayelekile futhi.Ungasebenzisa i-emulator kunoma iyiphi inguqulo yeWindows kungaba yiWindows 7 noma i-10 futhi iyahambisana nabaprosesa be-Intel ne-AMD nabo.
Ngakho-ke, ake sikhulume ngeBlueStacks lapha. Ukukhuluma iqiniso kakhulu, into enhle ngeBlueStacks ukuthi ingasebenza kunoma yiluphi uhlobo lwehardware yeWindows, kungaba yi-AMD noma i-Intel.IBlueStacks yaziwa njengenye ye-emulators engcono kakhulu ye-Android ongayithola ku-Windows ngaphandle kokungabaza.Ayigcini ngokudlala kuphela kepha njengomsebenzisi ojwayelekile, uma ufuna ukujabulela ezinye izinhlelo zokusebenza ze-Android ku-Windows PC khona-ke ake ngikutshele, iBlueStacks iyi-emulator enhle kakhulu enkonzweni yakho.
Ngonyaka, kube nezinguquko eziningi futhi kuthuthuke ngendlela engcono kanti iBlueStacks yamanje isuselwa ku-Android 7.1.2 eyiNougat.Abathuthukisi beBlueStack nabo bathembisile ukuthi abasebenzisi ukuthi izoletha iBlueStacks 5 kungekudala ngenjini entsha yokudlala nokuthi inguqulo ye-Android izosuselwa ku-Oreo.
Futhi, ukuhlinzeka ngesipiliyoni esimangazayo sokulingisa kwe-Android kuWindows, iBlueStacks ibambisene ne-Samsung ukuletha i-Galaxy Store kungxenyekazi yayo. Lokho kupholile ngempela, akunjalo?Ibuye ikunikeze ukufinyelela emidlalweni eminingi yekhwalithi ye-Android ku-Windows efaka i-Fortnite, RAID, Forces Forces, nokunye okuningi. Futhi asikwazi ukukhohlwa ngokusebenza.
Le nkampani ithi iBlueStacks inamandla kakhulu kunezingcingo ezijwayelekile ze-Android laphaya.Ngaphezu kwalokho, inezinhlobo ezahlukahlukene zezici ezinjengezibonelo eziningi, imephu yokhiye, kanye nenjini yokudlala esekelwa ku-AI yokusebenza okumangazayo.
Sekukonke, uma ufuna i-emulator engcono kakhulu ye-Android kuWindows ngakho-ke amaBlueStacks ngokuqinisekile azoba phezulu ohlwini.
3. Isidlali se-Remix OS
I-Remix OS Player iyi-emulator yamahhala ye-Android esebenza ngeWindows esebenza nge-Android 6.0 Marshmallow.Uma ngikhuluma iqiniso, i-Remix OS Player ngezindlela eziningi, enye yama-emulators amahle kakhulu we-Android ngaphandle lapho amawindi. Akugcini nje ukuthwala ithani lezici ezifana nohlobo lwenethiwekhi, ukwesekwa kwendabuko kwe-Google Play, ukwenziwa kwezinkinobho, izilungiselelo zemandla zamandla wesiginali, indawo, ibhethri, nokunye okuningi.
Sizamile kwamanye ama-laptops ebesinawo futhi sithembekile, isoftware ayikaze isishiye nhlobo.Ukuzinza yilokho wonke umuntu akubhekayo futhi nesidlali se-Remix OS sikuletha ngaphambili.Futhi, udinga ukugcina engqondweni yakho, i-Remix OS Player ayisasebenzi ekuthuthukisweni. Kepha ongakwenza, sebenzisa ukwakhiwa okudala okususelwa kuMarshmallow. Isebenza kahle impela.
Sizamile lesi simisi futhi ake ngikutshele, kuza nezici eziningi ezimangazayo njengokulungiswa kwe-Gameplay, ikhono lokushintsha ukwakhiwa kwedivayisi ye-Android. prop, ukuhambisana kwesilawuli, kanye nokusebenziseka kalula okusebenziseka kalula ngezinye zezinto uNox Player anazo. Ngalokhu, nakanjani kudlula abanye abalingisi be-Android ku-Windows.
Ngakho-ke, uma umuntu ekhona efuna i-emulator ye-Android ku-Windows enamathani wezici ngaphandle kokudlala nje, ngakho-ke, uNox Player nakanjani uzoba ukukhetha okuhle kuwe.
Kususelwa ku-Android Lollipop 5.1.1, kodwa ingxenye eyodwa emangalisayo ukuthi, ungasebenzisa izinhlobo eziningi ze-Android kuze kufike kuNougat usebenzisa isici sayo seMulti-Drive, futhi kumahhala ukulanda.
Kunesinye isici lapho uNox Player egqama ngokweqiniso ngaphezu kwamanye ama-Emulators ukuthi amandla okuthola izimpande. Uma kungenzeka wake wazama ukhula lwenkohlakalo egcwele kwamanye ama-Emulators, ungahle wazi ukuthi kuwumsebenzi onzima kakhulu.
Ngenkathi kukuNox Player, konke okudingeka ukwenze kumane kunike amandla ukushintsha kuzilungiselelo, ne-BOOM! - unezimpande. Lokho kulula kakhulu, akunjalo? Umdlali weNox ulungele nina bafana futhi ngikholwa ngempela ukuthi uphakathi kwama-emulators amahle kakhulu we-Android ku-Windows.
I-LDPlayer ikhuphuke ngokushesha yathandwa ngenxa yokusebenza kwayo okuhle. Ngeke ukholwe, kepha sekuyizinyanga ezimbalwa nje yethulwa. Ngokuqondene nenguqulo yayo ye-Android, i-LDPlayer isebenza ku-Android Nougat (7.1.2) yokusebenza okumangalisayo nokuhambisana futhi futhi kumahhala ngokuphelele ukulanda.Uma ufuna i-emulator ye-Android Windows 10 lokho kwenzelwa ikakhulukazi ukugembula ake ngikutshele, i-emulator yakamuva edolobheni yi-LDPlayer.
Kukhona nesitolo sohlelo lokusebenza semidlalo eza ne-emulator futhi isebenza kahle kwi-LDPlayer. Uma ufuna ukuthuthukisa ukusebenza okufanayo ungahle futhi usebenzise i-Virtualization Technology ekhasini lezilungiselelo. Ngingasho ukuthi i-LDPlayer iyi-emulator esesikhathini ye-Android ekunikeza okulula. Kepha, ngasikhathi sinye isipiliyoni esinamandla kakhulu se-Android kumakhompyutha weWindows, kungaba ukudlala noma ukusetshenziswa nje okujwayelekile.
Isebenza ngokungenaphutha ngaphandle kwephutha. I-emulator izosebenza kahle kuma-PC asekelwe e-Intel nakwi-AMD.
Ngakho-ke, uhlu esilunikeze ngenhla ngamanye ama-emulators amahle kakhulu we-Android ongawasebenzisa ukusebenzisa kwi-Windows PC yakho.Ungaba ngunjiniyela ofuna ukuvivinya izinhlelo zokusebenza noma ungahle ube ngumsebenzisi ojwayelekile ovele aqalaze ukudlala imidlalo ethile, nakanjani uzothola i-emulator engcono kakhulu oyidingayo.
Zonke lezi emulators ziyamangalisa nje ngokwenza kahle futhi zinezici eziningi. Futhi, lokhu kukhululekile ukulanda. Ngakho-ke, ungavele ukhethe noma yini bese uzama ngokwakho ukuthi ikusebenzela kanjani wena nemidlalo yakho.
Dlala iPUBG Mobile ku-PC